नाङ्गो फोटो ... | Kamsastra
Sex, नाङ्गो फोटो ...,
कामको कारण भुषण साइतमै बसेको थियो। अनि स्कूलमा बिदा भएकोले केटाकेटी सहित तारा पनि साइतमै आइरहेको थियो। प्रोजेक्टको क्वार्टरमा कोठाहरु यथेस्तै थियो। आफ्नो assignment साइतमै आएर install and operate गर्नु परेकोले सागर पनि साइतमा आएको थियो। काममा ब्यस्त हुंदाहुंदै अलि अबेर नै भयो। अनि साँझ गेष्टहाउस फर्कने बेला प्रोजेक्टको गाडी बिग्रिएको खवर आयो। भुषणकै क्वार्टरमा बस्नु बाहेक सागरको लागि अरु उपाय थिएन।
"ठिकै छ नि, अनि भोलि पनि सबेरै काम थाल्न सकिन्छ",
खालि चेन्ज गर्ने लुगा केहि थिएन। भुषणको लुगा दिए पछि त्यो पनि समस्या भएन।
केटाकेटीसंग खेल्दै गफ गर्दै खाजा खाइसकेपछि सागर र भुषण तिभिहेर्न बसे। डिनर अलि अबेर नै भयो। खाना पछि अझै एउटा बोर्डगेम खेल केटाकेटीसंग भयो। त्यसपछि अब पुग्यो भनेर ताराले केटाकेटिलाइ सुत्न उनीहरुकै कोठामा लगिन। छोरालाइ सुताउन भुषण पनि लाग्यो।
ठुलो लिविङ्ग रुम भएकोले सागरको लागि त्यहि कोठामा बेड मिलाउने कुरा भएको थियो। सागर एक्लै तिभी हेरेर बसिराखेको बेला करिब १०-१५ मिनेट पछि तारा त्यहाँ आइन्। "साइतमा कति बस्नुहु्छ" सागरले कुरा सुरु गय्रो। अर्को केहि समय यस्तै साधारण कुराकानीमा बित्यो।
केहि बेरमा भुषण पनि आइपुग्यो। "सु्त्यो?" ताराले सोधिन्, "वहाँलाइ पनि त्यो गेस्ट बेड खोलिदिने होइन त?"
"हैन् मलाइ यहिं सोफामै भए पनि हुन्छ नि" सागरले भन्यो।
"मिलाउन त त्यहि सोफाकै बनाउने हो, ठिक छ, अहिले एकछिनमा मिलाउँला नि" भुषणले भन्यो।
अनि तिनजना तिभिहेर्दै गफ गर्न थाले। पहिले कम्प्युटरमा गफ (च्याट) गरेर धरै भित्रीकुरा थाहाभैसकेको भए पनि अहिले भने औपचारिक कुराकानीमै समय गइरहेको थियो। तारालाइ सागरले भाउजु भनेर नै सम्बोधन गरिराखेको थियो। अब कुरा अर्को भाउजुको आउन थाल्यो।
"अनि किन भाउजुलाइ नल्याउनु भएको नि?" ताराले सोधिन्।
"अहिले कामकै हतारमा हिंदेको, अब पछि आउदा ल्याउँला नि"
"मैले त भाउजु कस्तो छ भनेर थाहा पनि छैन्, कहिल्यै देखेको छैन्।"
"मसंग फोटो छ नि, हेर्नुहुन्छ?"
सागरले आफ्नो laptop खोल्यो। र एकै क्षणमा पार्बतीको फोटो स्क्रिनमा ल्यायो। अनि छोरीको, अनि सबै परिवारको।
"अस्तिको फोटो पनि देखाउनुस न" भुषणले प्रसंग अलि बदलेर कुरा निकाल्यो।
फोटो देखाउने क्रममा सागरले स्क्रिनमा पार्बतीको नाङ्गो फोटो अगादि आयो जसमा उनी आफ्ना दुइ हातले दुइ बुबु छोपेर बसेको थियो, र अनुहारमा मुस्कान थियो।
"राम्रो" भुषणले कमेण्ट गय्रो।
"तपाइलाइ त यस्तो राम्रो लागि हाल्छ नि, खै म जान्छु" ताराले भनिन्।
"हैन एक छिन हेर न। बरु आरामले बसेर हेरौं न" भुषणको प्रस्ताबमा सबै भुइँमा बसे। भुषण एकचोति बच्चाहरुको कोठामा हेर्न गयो, सुतिराखेको छ कि छैन भनेर। फर्केर आउदा उसले कोठाको बत्ती निभाइदियो। अब तिभी र कम्प्युटर स्क्रिनको उज्यालो मात्र कोठामा थियो। तारा अब स्क्रिनको ठिक अगादि र सागर र भुषण दायाँ बायाँ थिए। तारा आफ्नो बायाँतिर बसेको भुषणको काँधमा अढेस लगाएर बसेको थियो। सागरले फोटो देखाउने क्रममा अब उनीहरुले पहिले नदेखेका पुरै अनुहार आउने नाङ्गा फोटोहरु देखाइराखेको थियो।
भुषणको दायाँ हात तारालाइ अँगालो हालेर बसेको थियो। धेरै चोटि कुराकानी भैसकेको भएता पनि साँचै पहिलो पटक केहि कुरा हुनलागिराखेको थियो। अर्को फोटोमा पार्वतीले सागरको लिङ्ग हातमा खेलाइराखेको थियो। ताराले आफ्नो नजर कम्प्युटरबाट हताएर भुषणको अनुहारमा लग्यो। भुषणले पनि त्यहि गरेको रहेछ। अंगालोमा रहेको उनीहरू अब ओठ ओठ जोडेर मस्तसंग किस गर्न लागे। सागरलाइ एकछिन अब के गर्ने जस्तो लाग्यो- अहिलेसम्म उसले कसैलाइ छोएका थिएनन्। सागर हतार गरेर situation बिगार्न चाहन्नथ्यो। उसले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको अर्को एउटा भिडियो प्ले गरे जसको दृष्य यो कथाको पहिलो अध्यायमा थियो।
अब तारा खुत्ता तन्काएर भुषणको अंगालोमा बसेको थियो। सागरले कम्प्युटर अलि पर लग्यो। अनि पहिलो पल्ट ताराको खुट्टामा हात हाल्यो। ताराले कुनै प्रतिकार त गरिनन् तर जीउ सिरिङ्ग भएको राम्रै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो। सागरको छुवाइले तारा अलि डराए जस्तो र अलि नर्भस भएको थियो। उनले भुषणलाइ बेस्सरी अंगालो हालिन्। उनले केहि भन्न खोजेजस्तो थियो तर भुषणले फेरि ओठमा ओठ जोडेर किस खान थाल्यो। अनि बिस्तारै भन्यो, "केहि हुंदैन्, it’s ok " र किस गर्दै हात ताराको जीउमा सलबलाउन थाल्यो।
सागरले बिस्तारै ताराको खुत्ताहरुमा मसाज गर्नलाग्यो। मसाजको एरिया बिस्तारै माथि माथि जानथाल्यो। उता भुषणको हात अब ताराको स्तनहरु माथि पुगेको थियो – किसिङ्ग त जारी नै थियो। सागरको हात तिघ्राहुदै माथि जान थाल्यो। जिस्क्याए जस्तै उसको हात योनिक्षेत्रबाट स्वात्त माथि पेटको एरियामा पुग्यो। लुगामाथिबाट सागरले ताराको ठुलठुला स्तनमा हात पुय्राए। भुषणको हात अब ताराको लुगाभित्र पसिसकेको थियो। उसको हात पछ्याउँदै सागरको हात पनि लुगा भित्र पस्यो र ब्रामाथिबाट दुध मोल्न थाल्यो।
ताराले अझ पनि भुषणलाइ बेस्सरी समातेर बसेको थियो। सागरले हात तल पठाएर ब्राको हुक खोल्यो र अब नाङ्गो न्यानो ठुलो स्तनहरु खेलाउन लाग्यो। एकै क्षणमा उनको लुगा पुरै माथि सरिसकेको थियो र सागर बुबु चुस्न लागेको थियो। अब भुषणले पनि पोजिशन बदलेर ताराको अर्को बुबु चुस्न आइपगेको थियो। तारा अहिले भुइमा उत्तानो पल्टेको थियो। दुइ दुध दुइ मान्छेको मुखमा चुसाएर बस्दा उनलाइ अति नै excitement भैरहेको थियो। उनको हात भुषणको कट्टु भित्र जान खोज्दै थियो। भुषण आफैले आफ्नो सबै लुगा खोले, अनि उठेर गइ तिभि बन्द गरिदिए। अब सागरको कम्प्युटरको लाइत बाहेक पुरै अंध्यारो थियो। भुषणलाइ थाहा थियो कि यो पहिलो पल्टको thrεεsome भएकोले तारा त्यत्तिको खुलेर सहभागी नहुन सक्छ र अंध्यारो बनाइदियो बने उनलाइ आफ्नो लाज लुकाउन अलि सजिलो हुनेछ र बढि रमाइलो हुन सक्छ। उसले कम्प्युटरको स्क्रिन पनि तलतिर झारी दियो। अब अलि अलि मात्र लाइत त्यहाबाट निस्किराखेको थियो। त्यो कम्प्युटरको लाइत आउने ठाउँमा उसले कण्डोमको पाकेट हाल्यो ताकि आवश्यक पर्दा सजिलै पाउन सकियोस्।
सागरको हात अब ताराको सुरुबाल तिर गयो। लुज सुरुवालमा उसको हात स्वाट्टै पस्यो। ताराले आफ्नो हात सागरको हात माथि ल्यायो र उसको हात समातेर आफ्नो योनिमाथि दल्यो। उनी पुरै तयार भैसकेकि थिइन्। सागरले उनको सुरुबाल र प्याण्टी तल तानेर तारालाइ पुरै निर्बस्त्र बनायो। अब लुगा भएको बाँकि उ मात्र थियो। उसको मुख अब ताराको योनिमा पुग्यो र मज्जाले खान, चात्न थाल्यो। ताराले पनि उसको मुखमा दनक दिएर साथ दिइन्। ताराको हात अब सागरको जीउमा छामछुम गर्न पुग्यो। सागरले आफ्नो कट्टु खोलेर तल झाय्रो र बिस्तारै 69 पोजिशन गर्न सजिलो हुने किसिमले माथि ल्यायो। पहिलो पल्ट ताराको हात सागरको लिङ्गमा पय्रो।
उनी फेरी अलि डराए जस्तो भयो। तर सागर अब रोकिने स्थितिमा थिएन। उ ताराको माथि 69 पोजिशनमा पुग्यो। ताराले उनको लिङ्ग समातेर बिस्तारै मुखमा लगिन्। यो क्रमको गति बढ्दै गयो। भुषण उत्तानो परेर पल्टेर ताराको दुधहरु मोल्दै थियो। अनि पोजिशन बदलियो। तारा भुषणको माथि 69 पोजिशनमा आइपगिन। अब उनलाइ पछादिबाट चिक्न सागरले राम्रो अबसर पायो। हतपत कण्डोम लगाइ उसले ताराको चाक समातेर आफ्नो लाडो ताराको पुतिमा छिरायो र दनादन दिन थाल्यो। यो उनीहरुले धेरै पहिले देखि सोचिराखेको पोजिशन थियो। ताराको पुतिमा अहिले तलबाट भुषणको मुख र पछादिबाट सागरको लाडोले मस्ती दिइराखेको थियो। अनि उनको मुखमा पनि भुषणको लाडो थियो।
सागरको आउदासम्ममा तारा त दुइ तीन चोटी लखतरान भैसकेको थियो। अनि उनी उत्तानो भुइमा पल्टिइन्। अब भुषण उनको माथि साधारण पोजिसनमा चढे।
Labels: Sex, नाङ्गो फोटो ...